eji ehi ura blanket
Abamuru nke Ịhọrọ a achara blanket
Ò nwetụla mgbe ị nụrụ nke a achara blanket? Ọ bụ ihe magburu onwe ngwaahịa na awade nza nke nkasi obi. Ndị a blanket na-mere si ultra soft achara eriri na-eme ka ọ a obi ụtọ dị ukwuu n'ihi na ị na snuggle na.
Achara blanket na-họọrọ site na ọtụtụ ruru ya softness na awade enwekwukwa obi. Achara bụ ma ama maka ya antibacterial Njirimara. O nwere achara Kun, nke bụ a eke antibacterial n'ụlọnga. Ọ nwere ike na-egbu nje bacteria na pests na inwe oké egwu ike. Ọ na-achụ ha achụ chinchi, ebu, na allergens. Nke a na-eme ka blanket a ike na ala nhọrọ.
Achara eriri bụ oké ọzọ ka manmade emep uta eri ndị dị otú ahụ dị ka naịlọn na polyester. Nke a na-akpa ákwà bụ breathable na nwere ike ime ka nnọọ nro blanket. Ọ bụ nke ukwuu absorbent kwa. Ya breathable quality na-agba ume na evaporation nke ọsụsọ na-amịkọrọ ahụ odors. Nke a na atụmatụ na-eme ka ya a na-ewu ewu oke maka ndị nne, ndị na-achọ ka ha na ụmụ ọhụrụ na-ekpo ọkụ na ala.
Achara blanket na-abịa na mara mma na agba na dị iche iche nha. Ị nwere ike ịhọrọ site a nso nke vibrant agba na aghụghọ. Obere size blanket dị ka nwa gị snug na-ekpo ọkụ mgbe ị na-eme njem. Adult size blanket dị ukwuu maka ndị, bụ ndị chọrọ mmezi nkasi obi na okomoko. The ultra adụ, ala blanket bụ ezigbo maka ojiji nile n'afọ. Nke a blanket dị mfe ịnọgide na-enwe na e nwere ike na-asa na mmiri ọkụ na igwe.
Ọ bụ a ndammana na-eto eto osisi, kwuru maka ya nkwado. Ọ bụrụ na ọ na-egbutu, ọ ga-adị mfe dochie. Ọ bụ ihe ndị kasị akatara osisi na ụwa. Ọ dịghị achọ ka ọgwụ ahụhụ na-eto eto. Achara enye 40% mmezi oxygen na ewepu na-emerụ ọgwụ site n'ikuku. Atụmatụ ndị a ka achara blanket a oké gburugburu ebe obibi enyi na enyi nhọrọ.
Achara blanket bụ ezigbo ndị, bụ ndị na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ na eri. Ya breathable mma na-eme ya mma maka ojiji na summers na winters. Ọ na-eme na-adị gị na-ekpo ọkụ na winters ma na-eme ị na-ajụkwa na-ekpo ọkụ summers.
Nke a eriri nwere ike na mgbanwe nke owu. Ke adianade do, o nwere ọtụtụ ndị ọzọ ịtụnanya atụmatụ dị ka mgbochi nje ike, elu absorbent, silky ire ụtọ na ahụ iru ala na ahụhụ na allergen repellence ikike. The blanket mere nke achara na-popularly eji na ntụrụndụ na dara oké ọnụ hotels na chọrọ inye kacha nkasi obi ha ọbịa.
The price blanket mere nke achara dịgasị dị ka size. Ọ bụ ezie na ndị a blanket na-ọzọ dị oké ọnụ karịa nkịtị blanket, ha na-enye kacha nkasi obi.
lebara North Side nke Xiaoyi River, Logistic Industrial Mpaghara, Hongrun Street, Gaoyang County, Baoding, Hebei, China (Chile)